Inokunciphisa indawo yokupakisha kunye nevolumu ngaphandle kokutshintsha ukumila kwezinto.Ngemva kokupakisha ukupakisha, iphakheji iya kuba tyaba, incinci, ubungqina bokufuma, kunye nothuli. Kuyanceda ukugcina iindleko kunye nendawo yokugcina nokuhambisa.
I-DZ (Q) -600LG
Umatshini wamkela ukutywina okuthe nkqo komoya, igumbi elikhulu lokucoca ulwelo, kunye nohlobo oluvulekileyo lokugquma. Igumbi elingenanto lenziwe ngentsimbi engenasici, efanelekileyo kwimichiza, ukutya, i-elektroniki, amayeza kunye namanye amashishini.
I-DZ (Q) -600L
Lo matshini ngumatshini wokupakisha ongaphandle othe nkqo, onotywina oluthe nkqo, olulungele ukucocwa okanye ukufakelwa okungafunekiyo kwezinto ezithile ezinkulu okanye iimveliso kulula ukuthulula.
Lo matshini luhlobo lwetheyibhile yokupakisha umatshini wokupakisha ngenkqubo ekhethekileyo yokutsala kunye nesixhobo sokukhupha. Umatshini wonke uhambelana kwaye unokubekwa kwidesktop yokupakisha.
I-DZ (Q) -600T
Lo matshini luhlobo lwangaphandle-lwangaphandle tyaba umatshini wokupakisha, kwaye aluphelelanga kubungakanani begumbi lokucoca. Ingacoca ngokuthe ngqo (ifake) imveliso ukuyigcina intsha isentsha kwaye iyintsusa, kuthintelwe, ukuze kwandiswe ukugcinwa okanye ukugcinwa kwemveliso kwikota leyo.
Umatshini wokuPakisha weGumbi elikhulu
Lo matshini usebenzisa igumbi elingena-ntsimbi elingenanto kunye nesembozo se-plexiglass esomeleleyo. Umatshini wonke mhle kwaye uyasebenza, kwaye kulula ukusebenza.
Ultrasonic itywina lesitywina luhlobo lomatshini olusebenzisa i-ultrasonic concentrator ukuba isebenze kwindawo yokutywina yesikhongozeli sokupakisha ukutywina iphakheji.
Lo matshini ubumbene kwaye ubhetyebhetye. Ngomsebenzi omncinci ongaphantsi kwe-1 cbm, iyakwazi ukwenza yonke inkqubo ukusuka ekulayisheni ityhubhu, ukuqhelaniswa, ukuzaliswa, ukutywinwa, ukuthoba kwimveliso yokugqibela.
Uchungechunge lwe-FG semi-auto seiler sealer luyathandwa kwimveliso yokutya kwemveliso encinci naphakathi. Yonga iindleko kunye necompact. Kwiimveliso ezahlukeneyo, kukhethwa ukuba kwenziwe ukupakisha komoya oguqulweyo okanye ukupakisha ulusu.
I-FSG series auto itreyi sealer isetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yokuhlamba ukutya ngokusebenza kwayo okuphezulu. Iyahlengahlengiswa kwiitreyi ezinobukhulu obahlukeneyo kunye neemilo. Kananjalo, kunokukhetha ukufaka ukupakishwa komoya oguqulweyo, okanye ukupakisha ulusu, okanye zombini zidityanisiwe.
Elula nekhuselekileyo, oko kulungele ukuwelda izinto ezininzi zeplastiki, ezinjengeebhanile, amalaphu e-PVC Kuyinto bhetyebhetye ukulungisa ixesha ubushushu kunye nexesha okupholisa. Kwaye, ubude bokutywina bunokuba yi-1200-6000mm.